Mpanamboatra resin am-pandriana miharo ambongadiny | Dongli
Resins Bika aman'endrika fisehoana fifehezan asavondrona Ionic teny Total Capacity meq / ml Votoatin'ny hamandoana Fanovana Ion Ratio Lanja fandefasana g / L fanoherana
MB100 Manadio vakana boribory Gel SAC R-SO3 H+ 1.0 55-65% 99% 50% 720-740 > 10.0 MΩ
Gel SBA R-NCH3 NY- 1.7 50-55% 90% 50%
MB101 Manadio vakana boribory Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 40% 710-730 > 16.5 MΩ
Gel SBA R-NCH3 NY- 1.8 50-55% 90% 60%
MB102 Manadio vakana boribory Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 30% 710-730 > 17.5 MΩ
Gel SBA R-NCH3 NY- 1.9 50-55% 95% 70%
MB103 Manadio vakana boribory Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 1 * 710-730 > 18.0 MΩ *
Gel SBA R-NCH3 NY- 1.9 50-55% 95% 1 *
MB104 Manadio vakana boribory Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% Fitsaboana rano mangatsiaka anaty
Gel SBA R-NCH3 NY- 1.9 50-55% 95%
Fanamarihana ambany pejy * Ity misy mitovy; Vita ny rano manasa mahery:> 17.5 MΩ cm; TOC <2 ppb
Ny resina fandriana feno rano tena madio dia misy karazana resina fifandimbiasan'ny asidra mahery ary resina fifanakalozana alkali anion mahery, ary namboarina indray ary nifangaro.
Ampiasaina indrindra amin'ny fanadiovana mivantana ny rano, ny fanomanana rano madio ho an'ny indostrian'ny elektronika ary ny fikarakarana tsara fandriana mifangaro amin'ny fizotran'ny fitsaboana rano hafa. Izy io dia mety amin'ny saha fitsaboana rano isan-karazany miaraka amin'ny fitakiana effluent avo lenta ary tsy misy fepetra famerenana amin'ny laoniny, toy ny fampitaovana, kapila matevina, CD-ROM, tabilao mihodina, fitaovana elektronika misimisy sy indostrian'ny vokatra elektronika hafa, fitsaboana sy fitsaboana ara-pahasalamana, indostrian'ny kosmetika, indostrian'ny milina mazava, sns
1, halavan'ny pH: 0-14
2. mari-pana azo avela: karazana sodium ≤ 120, hydrogène ≤ 100
3, tahan'ny fanitarana%: (Na + ka H +): ≤ 10
4. Ny haavon'ny resina indostrialy M: ≥ 1.0
5, famerenana vahaolana amin'ny laoniny%: nacl6-10hcl5-10h2so4: 2-4
6, fatra fanajana kg / m3 (vokatra indostrialy arakaraka ny 100%): nacl75-150hcl40-100h2so4: 75-150
7, tahan'ny fikorianan'ny rano miverimberina M / h: 5-8
8, ora fifandraisan'ny fiterahana indray: 30-60
9, tahan'ny fikorianan'ny rano fanasana M / h: 10-20
10, minitra fanasana: manodidina ny 30
11, tahan'ny fandehanana miasa M / h: 10-40
12, fahafaha-miasa miasa mmol / L (lena): famerenana sira ≥ 1000, famerenana asidra klorika ≥ 1500
Ny resin am-pandriana mifangaro dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanadiovana rano amin'ny alàlan'ny famolahana ny rano fanodinana mba hahatratrarana ny kalitaon'ny rano (toy ny rafitra osmosis). Ny anaran'ny fandriana mifangaro dia misy resina fifanakalozana asidra mahery ary resina fifanakalozana base anion mahery.
Ny fiasan'ny resin am-pandriana mifangaro
Ny déionisation (na demineralization) dia midika fotsiny hoe fanesorana ion. Ny ionona dia atômaly na molekiola hita ao anaty rano miaraka amin'ny fihenan-tsoa miiba na miabo. Ho an'ny rindranasa maro izay mampiasa rano ho toy ny mpandraharaha manadio na singa manadio, ireto ion ireto dia heverina ho maloto ary tsy maintsy esorina ao anaty rano.
Ny ionona voatsabo tsara dia antsoina hoe cations, ary ny ion misy fiatraikany ratsy dia antsoina hoe anion. Ny fifanakalozana ion dia mamadika ireo cations sy anion tsy ilaina amin'ny hidrogen sy hidroksil hamorona rano madio (H2O), izay tsy ion. Ity manaraka ity dia lisitr'ireo ion iraisana amin'ny rano monisipaly.
Fitsipika miasa amin'ny resin-pandriana mifangaro
Ny resins am-pandriana mifangaro dia ampiasaina hamokarana rano deionized (demineralized na "Di"). Ireto resins ireto dia vakana plastika kely misy rojo polymer organika miaraka amina vondrona miasa voapetraka ao anaty vakana. Ny vondrona miasa tsirairay dia manana fiampangana miorina tsara na ratsy.
Ny resina cationic dia manana vondrona miasa ratsy, noho izany dia manintona ion-izy ireo izy ireo. Misy karazana resins cation roa, cation acid malemy (WAC) ary cation acid mahery (SAC). Ny resina asidra malemy dia ampiasaina indrindra amin'ny alikaola sy fampiharana hafa tsy manam-paharoa. Noho izany, hifantoka amin'ny anjara asan'ny resina asidra mahery ampiasaina amin'ny famokarana rano deionised isika.
Ny resa Anionika dia misy vondrona miasa tsara ary manintona ny ion-tsivana ratsy izy ireo. Misy karazana resin anion roa; Anion base malemy (WBA) ary anion base base (SBA). Ireo karazana resina anionika dia ampiasaina amin'ny famokarana rano deionized, saingy manana ireto toetra manaraka ireto izy ireo:
Rehefa ampiasaina ao amin'ny rafi-pandriana mifangaro, ny resin WBA dia tsy afaka manala silica, CO2 na manana fahaizana mandamina ny asidra malemy ary manana pH ambany noho ny atsy na ny aroa.
Ny resin am-pandriana mifangaro dia manaisotra ny anion rehetra eo amin'ny latabatra etsy ambony, ao anatin'izany ny CO2, ary manana pH avo kokoa noho ny tsy miandany raha ampiasaina amin'ny rafitra fandriana tsy miankina roa noho ny famoahana ny sodium.
Ny resina Sac sy SBA dia ampiasaina ao amin'ny fandriana mifangaro.
Mba hamokarana rano deionized, ny resina cation dia averina amin'ny asidra hydrochloric (HCl). Ny hidrogen (H +) dia voadidy tsara, noho izany dia miraikitra amin'ny vakana resin cationic resahina. Ny resina anion dia novelarina niaraka tamin'i NaOH. Ny vondrona Hydroxyl (OH -) dia voadona amin'ny fomba ratsy ary miraikitra amin'ny vakana resin anionika tsara.
Ny ionona samihafa dia voasarika amin'ny vakana resin miaraka amin'ny tanjaka hafa. Ohatra, ny calcium dia manintona vakana resin-kôkôika matanjaka kokoa noho ny sodium. Ny hidrôzenina amin'ny vakana resin'ny kôtika ary ny hidroksil amin'ny vakana resin anionika dia tsy misy manintona mafy an'ireo vakana. Izany no mamela ny fifanakalozana ion. Rehefa mivezivezy amin'ny vakana resin cationic ny cation, dia hydrogen (H +) ny fifanakalozana cation. Toy izany koa, rehefa mivezivezy amin'ny vakana resin anion ny anion miaraka amina fihenan-danja dia mifanakalo amin'ny hydroxyl (OH -) ny anion. Rehefa atambatra ny hidrôzenina (H +) amin'ny hydroxyl (OH -) dia mamorona H2O madio ianao.
Farany, ny toerana fifanakalozana rehetra ao amin'ny vakana cation sy anion dia resahina, ary ny tanky dia tsy mamokatra rano deionised intsony. Amin'izay fotoana izay dia mila averina haverina ny vakana resin mba hampiasaina indray.
Fa maninona no mifidy resin fandriana mifangaro?
Noho izany, farafahakeliny karazana resins fifanakalozana ion ilaina roa hanomanana rano ultrapure amin'ny fitsaboana rano. Ny resina iray dia hanaisotra ny ion misy fiampangana tsara ary ny iray kosa hanafoana ny ion misy fiatraikany ratsy.
Ao amin'ny rafi-pandriana mifangaro, ny resina kationika dia voalohany foana. Rehefa miditra ao anaty tanky feno ranoka cation ny rano monisipaly dia manintona ireo vatan-kazo miorina tsara avokoa ary avadika ho hidrôzenina. Ireo tongolo manana fiampangana ratsy dia tsy ho voasintona ary hamakivaky ireo vakana resin'ny cationic. Ohatra, andao hizaha ny calcium calcium ao anaty rano fahana. Ho vahaolana, ny ion-kalsiôma dia voadidy tsara ary miraikitra amin'ny vakana cationic hamoahana ny ionômanôma. Chloride dia manana fiampangana ratsy, noho izany dia tsy miraikitra amin'ny vakana resin'ny cationic izy io. Ny hidrogen miaraka amina fihenan-tsoa dia mifatotra amin'ny ion klôroida hamorona asidra klorika (HCl). Ny effucent vokarina avy amin'ny sac exchanger dia hanana pH ambany dia ambany sy fitondra mandeha lavitra kokoa noho ny rano fisakafoanana miditra.
Ny effluent an'ny cationic resin dia misy asidra mahery sy asidra malemy. Avy eo, hiditra ao anaty tanky feno resina anion ny rano asidra. Ny resin'ny anionika dia hisarika ireo anion voavidy ratsy toy ny ion klôroôly ary hanakalo azy ireo amin'ny tarika hydroxyl. Ny valiny dia hidrogen (H +) sy hidroksil (OH -), izay mamorona H2O
Raha ny marina, noho ny "leakage sodium" dia tsy hamokatra H2O tena izy ny rafi-pandriana mifangaro. Raha mivoaka amin'ny alàlan'ny tanky fifanakalozana cation ny sodium, dia mitambatra amin'ny hydroxyl izy io mba hamorona sodium hidroksida, izay manana fitondra-tena avo. Ny fivoahan'ny sôdiôma dia misy satria ny sodium sy ny hidrogen dia tena manintona ireo vakana resin-kôlika, ary indraindray ny ion-tsiranoka dia tsy mifanakalo raha hidrôzenina mihitsy.
Ao amin'ny rafi-pandriana mifangaro, ny asidra mahery ary ny resin'ny anion fototra dia mifangaro. Io dia mamela ny tanky fandriana mifangaro hiasa amina efitrano fandriana mifangaro aman'arivony ao anaty tanky. Ny fifanakalozana cation / anion dia naverina tao anaty fandriana resin. Noho ny fifanakalozana cation / anion be dia be dia voavaha ny olan'ny famoahana sodium. Amin'ny fampiasana fandriana mifangaro, afaka mamokatra rano deionisialy avo lenta ianao.
Teo aloha: Resina fifanakalozana asidra mahery
Manaraka: Vakana volo inert sy Polymer